शेडिंग मशीन - आधुनिक पुरुष को जीवन मा एक अभिन्न अंग
घर र परिवार, सहायक उपकरणहरू
बाहेक एक व्यक्तिले सफा-शेवन च्याँट वा दाढ़ीलाई मनपर्छ भने चाहे, उनको अनुहारमा वनस्पतिहरू हेर्न आवश्यक छ। यसले मर्मत गर्न यो कार्य मेसिनसँग सामना गर्न मद्दत गर्नेछ। यदि तपाईं एक साँच्चै उपयुक्त मोडेल किन्नुहुन्छ र यसको साथ काम गर्न केहि सहि अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ एकदम राम्ररी छाला प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ वा एकदम तमाम र स्वच्छ बियर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यन्त्र चयन गर्दा, तपाईंलाई निम्न प्रदर्शन विशेषताहरू मा ध्यान दिन आवश्यक छ।
कपाल लम्बाइ दायरा
बालकोट र शेनका लागि प्रत्येक मेशिनसँग निश्चित मात्राको कपालको बाल हुन्छ, जुन प्रक्रिया पछि रहनेछ। केही मिसिनहरूमा कपालको लम्बाइको निचला सीमा मात्र 0.4 मिमी छ। माथिल्लो सीमा लगभग 18-20 मिमी पुग्छ। निस्सन्देह, सबै कुरा उपकरण र यसको लागतमा निर्भर गर्दछ। बजेट मेशिन प्राय: धेरै स्तरहरूमा लैजान्छ, तपाईंलाई बालको लम्बाइ 1 देखि 10 मिटर सम्म पुग्न अनुमति दिन्छ। अधिक महँगी मोडेल 0.1 मिमी को वृद्धि मा एक विस्तृत श्रृंखला मा कार्य गर्न सक्छन्। यन्त्र चयन गर्दा, तपाईंलाई सम्झन आवश्यक छ कि सबैभन्दा राम्रो शेडिंग मशीनको बाहिरी लम्बाइको धेरै तह छैन। सबै कुरा पुरुषको आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ। यदि उसले दाल लगाएन भने, जसको लागि तपाईंलाई सावधानीपूर्वक हेरौं, अनुहारको विभिन्न भागहरूमा विभिन्न लम्बाईको बाकस प्राप्त गर्न, राम्रो क्षमता संग औसत मूल्य कोटिको मोडेल एकदम उपयुक्त छ।
यन्त्रको उच्च शक्ति, कम आंदोलनहरूले म्यानिङ प्रक्रियामा गर्नु पर्छ। यो विशेष गरी मानिसहरु को लागि अनुहार को बिरुद्ध र घने वनस्पति संग विशेष रूप देखि सही छ। त्यस्तो दाँतका मालिकहरूले कम शक्तिको मर्मतसँग आदर्श रूपमा छाडिएको चिनलाई प्राप्त गर्न गाह्रो पार्नेछन्। यो प्यारामिटर यन्त्रसँग संलग्न टेक्निकल कागजातहरूमा फेला पार्न सकिन्छ। उच्च लागत र अतिरिक्त प्रकार्यहरूको विभिन्न प्रकारमा निर्भर नगर्नुहोस्, म्यानपावर कपालको लागि यस्तो मेशिनमा सानो क्षमता हुन सक्छ।
सबै रेजर दुई श्रेणीमा विभाजित गर्न सकिन्छ - रोटरी वा ग्रिड प्रणालीको साथ। रोटरी प्रणालीको साथमा यन्त्रमा यसमा धेरै डिस्क राखिएको एक टाउको छ। तिनीहरू चक्कुहरूसँग सुसज्जित छन्, जुन आक्रोशित गतिहरूको माध्यमले असामान्य र कठोर ब्रितल्सहरूसँग पनि हल्ला हटाउँछ। यस प्रणाली को नकारात्मक पक्ष उपचार को चाकू को नकारात्मक प्रभाव हो। पुरुषहरु संग संवेदनशील छाला यस्तो एक शेनिंग मिसिन उपयुक्त छैन। एक अधिक आरामदायक शेव एक जाल को साथ ठीक जाल संग कवर एक मोडेल द्वारा प्रदान गरिनेछ। यो कपाल हटाउन र छालाबाट कटौती गर्न आवश्यक छ। नेट भित्र चोरहरू आफै हुन्, जसले बाल काट्यो। कुनै पनि प्रणाली चयन भए तापनि, तपाईंलाई हेड माउन्टमा ध्यान दिन आवश्यक छ। बिक्रीमा रेजरहरू यसको अनूठा डिजाइन र एक निश्चित कोण झुकावसँग छन्, जुन एक सफा सफा प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। प्रायजसो फ्लोटिंग हेडको साथ एक मेशिन को अनुहार को सबै घटता दोहोरिन्छ। यो मोडेलले एक आरामदायक शेभ प्रदान गर्दछ र उत्तम परिणाम प्रदान गर्नेछ। प्रमुखहरूको संख्यामा पनि मान छ। एक रोटरी प्रणाली संग रेजर मा, यिनी इष्टतम संख्या तीन टुकडे छ, त्यो छ, तीन डिस्क। यदि ग्रिड प्रणालीको साथ एक शेन मेशिन प्रयोग गरिन्छ, हेड या त एक वा दुई हुन सक्छ, ट्रिमर तिनीहरूलाई बीच राखिएको। उनले ती भेडाहरू हटाउँछन् जुन पहिलो ग्रिड अन्तर्गत चाईकहरू हटाउन सक्दैनन्।
त्यहाँ पानीको प्रतिरोधी आवरण संग सुसज्जित, शेडिंग मिसिनहरु को केहि मोडेलहरु छन्। यसको मतलब यो ब्लेड सजिलै पानीको धारामा राखेर सजिलै सफा गर्न सकिन्छ। निर्माताहरु पनि मिसिनहरु को मोडेल प्रदान गर्दछ जो कि गीला मंजिल को लागि डिज़ाइन गरिएको छ या फोम संग शेडिंग। पहिलो विकल्पले विशेष लोशनको प्रयोग समावेश गर्दछ, दोस्रो - छालाको मासुहरूमा आवेदन गर्दै, बलियो फोम बनाउँछ। त्यस्ता प्रकार्यहरू पुरुषहरूका लागि संवेदनशील छालासँग सम्बन्धित छन्, जसले नमिशराइजको प्रयोग बिना हिसाब गर्न पछि गम्भीरतापूर्वक चिन्ता गर्न सक्दछ।
यी शेडिंग मशीनहरूको लागत एकदम उच्च छ, र तपाईंलाई उनीहरूको सावधानीपूर्वक उपचार गर्न आवश्यक छ। यहां सम्म कि एक नमी प्रतिरोधी बाड़े को उपकरण पूरी तरह गीला या ओपरेटिंग नियमों को उल्लङ्घन गर्दा काम नहीं रखेंगे।
रेजर निर्माताहरू, आफ्नो सामान प्रतिस्पर्धा गर्न प्रयास गर्दै, विभिन्न प्रकार्यहरूसँग उपकरणहरू लैजान। शेडिंग मशीनले सबै प्रकारका सामानहरू - मूल दाईको कटौती, विशेष ट्रिमरहरू, वैक्यूम प्रणालीहरू प्रदर्शन गर्नका लागी बाल कर्ट्ट्सहरू तुरुन्तै संग्रह गर्न सक्दछ। केहि मोडेलहरू टच स्क्रिनहरूमार्फत सुसज्जित छन्, जसको साथमा मेशिन नियन्त्रण गर्न सजिलो छ। यस्तो उपकरणमा, तपाइँ छिट्टै मोडहरू स्विच गर्न सक्नुहुन्छ र बालको इच्छित लम्बाइ चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, मेटिङ् सेटअप गरेपछि, डिस्प्ले लक गरिएको हुनुपर्छ, अन्यथा एक दुर्घटनामा तेज गतिको दौडान सबै डेटा हराउन सक्छ।
निचोड गरेर चमत्कार-एमओपी: के यो छ?
सबै अवसरहरूको लागि क्यालेन्डरको साथ घडी
के गैर छड़ी कोटिंग हानिकारक छ वा छैन?
बिरालो आँखा: पत्थरको गुण
यस अध्यायमा "बेला" मा Pechorin को विशेषताहरु (उपन्यास "हाम्रो समय को हिरो" मा आधारित)
Gennady Bortnikov: जीवनी र काम
आधुनिक खेलाडी - यो छ ...
Filmography, जीवनी: शमू Mendes द्वारा निर्देशित। "अमेरिकी सौन्दर्य" र अन्य चिरपरिचित फिलिमहरु
Dunno बारेमा पहेली - रोचक खेल
कला। 55 रूसी संघ टिप्पणी संग नागरिक प्रक्रिया को कोड
कसरी उपचार आफ्नो कपाल र बनाउन तिनीहरूलाई बलियो
कारण stye: लक्षण र वर्णन